Breaking News : सार्वजनिक यातायात खोल्ने या नखोल्ने भने विषयमा सरकारले जारी गर्यो यस्तो सुचना – List Khabar
Home / समाचार / Breaking News : सार्वजनिक यातायात खोल्ने या नखोल्ने भने विषयमा सरकारले जारी गर्यो यस्तो सुचना
Breaking News : सार्वजनिक यातायात खोल्ने या नखोल्ने भने विषयमा सरकारले जारी गर्यो यस्तो सुचना
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 834 Views
Breaking News : सार्वजनिक बसमा नयाँ नियम लागु !सरकारले चाल्यो यस्तो कदम, सार्वजनिक बसमा नयाँ नियम लागू ! काठमाडौं, सार्वजनिक सवारीका अनिवार्य रुपमा यात्रुले देख्ने ठाउँमा भाडादर टाँस्नुपर्ने भएको छ । यदी नराखेको पाइएमा कारवाही गरिने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै महाशाखाले सार्वजनिक सवारीहरुले यात्रुहरुको सहजताका लागि अनिवार्य भाडादर राख्ने नियम लागू गरेका बताएको छ । महाशाखाले अभियानकै रुपमा संचालन गरेर सार्वजनिक सवारीमा भाडादर टाँस्ने काम गरिहेको छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनको टुङ्गो लागेपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रबारे निर्णय हुने भएको छ ।एसईईले समग्र शैक्षिक कार्यक्रम नै प्रभावित पार्ने भएकाले नयाँ शैक्षिक सत्रबारे निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय केही समय पर्खने भएको हो ।
काठमाडौं । नेपालमा महामारीको दोस्रो लहर पनि तीव्ररुपमा फैलिइरहेको छ। दिनप्रतिदिन संक्रमित र मृत्यु दर बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो २४ घन्टामा मुलुकमा ७ हजार ९१४ जनामा सं क्रम ण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलले थप ७ हजार ९१४ जनामा सं क्रम ण पुष्टि गरेको हो। जम्मा १८ हजार ९६५ नमूनाको परीक्षण गराउँदा ७ हजार ९१४ जनामा सं क्रम ण देखिएको हो।
यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा थप १९३ जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। शनिबार मात्रै कोरोनाबाट १२९ जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै १ लाख १५ हजार ५४७ जना सक्रिय संक्रमित छन्।
मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा २ हजार ८२१ जना संक्रमित थपिएका छन्। ३६६ जना भक्तपुरमा, ६९४ जना ललितपुरमा र १ हजार ७६१ जना काठमाडौंमा गरी २ हजार ८२१ जनामा संक्र रम ण देखिएको हो। आज ७ हजार ६४४ जना सं क्रम णमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हिजो ८ हजार ९८० जनामा सं क्रम ण पुष्टि भएको थियो भने ८ हजार ८४८ जना सं क्रम ण मुक्त भएका थिए। गएको २४ घण्टामा १ हजार ७२१ जना आईसीयूमा उपचाररत रहेकोमा ४२४ जना भेन्टिलेटरमा छन्।
Previous “खुसीको खबर “पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार ७१६ जना संक्रमित निकाे भए
Next मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो! ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस र पुण्य प्राप्त गर्नुहोस